सोमबारको राशीफल: लगानी, धनआर्जन, प्रेम, यात्रा, स्वास्थ्य र परिवारमा कस्तो योग छ ? हेर्नुस्:: Artha Dabali
सोमबारको राशीफल: लगानी, धनआर्जन, प्रेम, यात्रा, स्वास्थ्य र परिवारमा कस्तो योग छ ? हेर्नुस्
वि.सं. २०७६ श्रावण २७ गते सोमबार तदनुसार ई. सं. २०१९ अगस्ट १२ तारिख, श्रावण शुक्ल (गुँलाथ्व) द्वादशी, पूर्वाषाढा नक्षत्र, धनु राशिको चन्द्रमा, विष्कुम्भ योग, बालब र कौलव करण आजको चाडपर्व र उत्सव स् पवित्र श्रावण महिनाको अन्तिम सोमवार, सोमप्रदोष व्रत, नेवारी पर्व बहिद्यवोय ।
विर्सिसकेको आफन्त र साथीभाइसँग भेट होला । धार्मिक र सांस्कृतिक महत्वको समय छ । चाहेजस्तो सहयोग नमिले पनि धन, मान, प्रतिष्ठामा कमि हुनेछैन । धेरै आशावादी बन्ने समय छैन ।
आफ्नै बुद्धि र बलको प्रयोगले काम बन्नेछ । यात्राबाट सोचेजस्तो ला मिल्ने छैन । राम्रो परिणामको लागि कडा मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
परिस्थिती अप्ठ्यारो भए पनि प्रयास गरेमा केहि काम बन्नेछ । अर्काको भर नपर्नु नै राम्राचे हुनेछ । अरुका काममा समय बित्नेछ । प्रयत्न गर्दा चुनौती पन्छाउदै सफलता पाइएला ।
स्वास्थ्य प्रतिकुल भए पनि हिम्मतले काम लिने समय छ । सहयोगीको माध्यमबाट फाइदा उठाउन सकिनेछ । आश मारेको कामले उत्साह जगाउनेछ । गोपनीयतामा ध्यान दिनुहोला ।
प्रेम र मित्रताको बन्धनमा कसिने समय छ । विभिन्न सहयोग र उपाहार पाइनेछ । सुखदुःखमा साथ दिनेहरु भेटिनेछ । परिवारको साथ पाइनेछ ।
व्यापार व्यवसायमा विशेष लाभ लिन सकिनेछ । विभिन्न भौतिक साधन जुट्नेछन् । मिहेनतले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । व्यावसायिक यात्राको सम्भावना छ । आज संयम हुने दिन हो ।
आत्मबल र हौसलामा कमी आउने छैन । पारिवारिक र दाम्पत्य सम्बन्ध प्रगाढ बन्नेछ । व्यापार र उद्योगतर्फ फाइदा हुने योग छ ।
वैदेशिक यात्रा लाभ दायक हुनेछ । समय मनोरञ्जनपूर्ण वित्नेछ । जुनसुकै काममा सफलता पाउन प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने समय छ । आर्थिक लगानी गर्नुअगाडि सल्ला सुझाव लिनुहोला ।
समय मिश्रित छ । मन अशान्त हुनेछ । सहयोगीको साथ पाइदैन । कुनै काम दोहोर्याई तेहेराई गर्नु राम्रो हुन्छ । व्यापार व्यवसायमा कमै मात्र फाइदा पाइएला ।
आफ्ना विषयवस्तुमा अरुले अधिकार जमाउन सक्नेछन् । योजनाहरु गोप्य राखेर काम गर्नुहोला । समय कमजोर भए पनि मिहिनेत परिश्रमका साथ प्रगति गर्ने समय छ ।
काम बिग्रने डरले साताउनेछ । सहयोग पाइदैन । अरुलाई दिएको वाचा पूरा गर्न सकिदैन । परिवारको काममा समय वित्नेछ । स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ ।
सम्झौताले खिन्नता बढाउनेछ । सतर्क भई व्यवहार गर्न किने विगतको कमजोरी र समस्या समाधान गर्न सकिनेछ । विदेशी प्रयोजनका लागि गरिएको काममा सफलता मिल्नेछ ।
काममा रोकावट आउने र कम मात्र फाइदा हुने समय छ । सहयोगीहरुले साथ नदिदा अप्ठ्यारोमा परिनेछ । सञ्चित धन खर्च गर्नुपर्ने समय छ ।
योजना कार्यान्वयन गर्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ । अध्ययनमा समय दिन सकिदैन । परिस्थितीले सोचेभन्दा फरक मोड लिन सक्छ । परिश्रम गरे पनि सफलता पाउन धैर्य गर्नुपर्ने समय छ । आशा गरेअनुसार साथ पाइदैन । धेर्यता र लगनशील भएमा मात्र काम बन्नेछ ।
अनावश्यक विवादमा परिएला ध्यान दिनुहोला । काममा बाधा आउन सक्छ । आलोचना गर्नेहरु बढ्न सक्छ । मान सम्मानमा घात पुग्ने देखिन्छ ।
गर्नैपर्ने बाध्यतात्मक आवश्यकताका लागि लगानी गर्नुपर्ने समय छ । प्रयत्न गर्दा व्यावसायिक काममा सफलता मिल्नेछ ।
शुभफल प्राप्तिमा कठिनाइ छ । मन चञ्चल र उत्सुक बन्ने समय छ । बोलीको गलत अर्थ लाग्नाले आफन्त टाढिनेछन् । लेनदेनमा विावद पर्न सक्छ । हिम्मतले काम गर्न नसक्दा पछि परिनेछ ।
खानपानको कारण स्वास्थ्यमा समस्या देखिन सक्छ । व्यापार व्यसायमा बेफाइदा छैन । मेहनत र लगनशीलताले काम बन्न सक्छ । सानातिना समस्या पन्छाएर काम बनाउने समय छ ।
शूरुमा खर्च बढे पनि दिगो फाइदा हुने काम प्राप्त हुनेछ । चुनौती पन्छाउदै काम बनाउने दिन हो । टाढाको यात्रा गर्ने अवसर
आउला । व्यवसायमा लगानी बढाउन सकिनेछ । स्वास्थ्यप्रति सर्तक रहनुहोला । दिगो आम्दानी हुने काम फेला पर्नेछ तर फाइदाको पछि लाग्दा साथीभाइ टाढिन सक्छन् । प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ ।
समय उत्सावद्र्धक छ । श्रमको उचित मूल्यांकन हुनेछ । व्यापार व्यवसायमा फाइदा हुनेछ । आम्दानीको नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन् । आम्दानी बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हात लाग्नेछ । पितृधनको उपयोग गर्न सकिनेछ ।
नयाँ ज्ञान प्राप्त हुनेछ । परिवारमा सुमभुर सम्बन्ध कायम हुनेछ । सरकारी र प्रशासनिक कामबाट लाभ लिन सकिनेछ ।
समय मिश्रित खालको छ । भूमि, वाहन र पैत्रिक सम्पत्तिबाट खासै लाभ पाउन सकिदैन । व्यापारमा समय दिन नसकेमा बेफाइदा हुनेछ । सामाजिक र परोपकारका मार्गमा अवरोध आउनेछ ।
विशिष्ट व्यक्तिसँगको उठबसले काममा बाधा पुग्नेछ । हरेक काम दोहोर्याएर गर्नुपर्ने छ । मनमा निराशा पलाउन सक्छ । हिम्मता हार्नुहुँदै । कडा मिहिनेत र परिश्रम गरेमा लाभ प्राप्त हुनेछ । अरुलार्य प्रभावित पारेर दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ ।